Xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida Oo Soo Badhigay Jidka Loo Marayo Dibu-habaynta Siyaasadda DDS - Jigjiga Online
HomeSomalidaXisbiga Dimuquraadiga Soomaalida Oo Soo Badhigay Jidka Loo Marayo Dibu-habaynta Siyaasadda DDS
Jigjiga (Jigjigaonline) – Xisbiga haya talada Dawladda Deegaanka Soomaalida ee XDS ayaa ayaa soo bandhigay jaan-tus muujinaya hannaanka loo marayo dibu-habaynta siyaasadda DDS.
War-saxaafadeed kasoo baxay xisbiga ayaa lagu soo bandhigay su’aalo badan oo laga doodi doono, kuwaas oo dhamaantood ku qotoma isbeddelka DDS uu ka sameeyey xisbigu.
Sida ku cad jadwalka barnaamijka loogu talla galay in lagu maamuso xuska sanad guurada 21aad ee kasoo wareegtay markii la aas-aasay xisbiga dimoqraadiga soomaalida, ayaa ah in laqabto kulano waawayn oo dood cilmiyeedyo ah.
Kulankaas ayaa waxaa lagusoo bandhigi doonaa qoraal siyaasadeed si cilmiyeeysan oo qoto dheer losoo diyaariyey isla markaana xanbaarsan Qodobo lagaga Doodayo Dood-cilmiyeedka Xuska Sanad-guurada 21aad ee XDS, nuqul qoraaledkan siyaasadeed oo uu soo diyaariyay isla Xafiiska Xarunta Golaha Dhexe ee Xisbiga Dimoqraadiga Soomaalida(XDS) ayaa waxaa summad looga dhigay “Wadiiqo-tusmeedka Dib-u-habaynta Siyaasadeed ee Deegaanka”.
Isla nuqul qoraaleedkan lagusoo bandhigayo kulanka dood cilmiyeedka ah ayaa lagu xusay qodobada ay ka doodi doonan kasoo qayb galayaasha dood-cilmiyedkan ee xubnaha xisbiga, sidoo kalle waxaa iyana ka doodidoona dhankooda qodobadan dhaman xubnaha xisbiga ee heer deegan illaa iyo heer tuulo ee DDS.
Qodobada Laga Doodayo;
Sideed u aragtaa jihada geedi-socodka dib u habaynta siyaasadeed ee XDS?
Sideed u aaragtaa nidaamka dib u habaynta Maamulka? Maxaad isledahay way haboonan lahayd hadii lagu daro?
Sideed u aragtaa jihooyinka dib u habaynta sharciga ee lagu cadeeyay jihooyinka wadiiqo tusmeedkan? Ka dhiibo aragtidaada kuwajahan ?
Sideed u aragtaa aas-aasida fooramka xisbiyada siyaasadeed ee deegaanka?
Waa Maxay kaalinta saxaafadu ay ku yeelan karto xaqiijinta isbadalka dalka iyo deegaankaba? side looga faa’iidaystay xoriyatul qawlka? Dhibaatooyin nooce ah ayaa lagala kulmayay?
Sidee loo xaqiijin karaa sugida xuquuqaha bini’aadanimo ee deegaanka?
Waa maxay kaalinta dhalinyarta ay ku yeelan karaan xaqiijinta isbadalka siyaasadeed ee ka socda deegaanka?
Waa maxay kaalinta Qurba-joogta ay ku yeelan karaan xaqiijinta isbadalka? Caqabad intee le’eg ayaa ka iman karta?
Xisbiga Dimoqraadiga Soomaalida (XDS)